TRINITERA: Arahabaina tratry ny fetin'ny Trinite Masina
Arahabaina tratry ny fetin'ny Trinite Masina
Mistery Fototry ny Finoantsika kristianina ny Misterin'ny Trinite Masina. Tokana Andriamanitra nefa olona telo. Fitiavana Izy ary te hampahafantatra antsika ny hasarobidin'ny fahasamihafana izay zary harena enti-misaotra Azy Mpahary.
Tsy mora mandrakariva anefa ny miaina ny fahasamihafana. Vita Batemy tamin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina isika, ka voairaka hitory ny Fitiavan'ilay niantso antsika "hiala tao anatin'ny haizina, mba ho amin'ny fahazavana mahagaga". Sakramenta ny Batemy, ka noho izany dia manambara sy mampahazo ny fahasoavana. Dia izany no nandraisantsika ny fahasoavana avy amin'ilay Ray Mpahary, ilay Zanaka Mpanavotra, ary ilay Fanahy Mpanamasina.
Miarahaba antsika Trinitera manokana ihany koa.
Mety hanontany ny maro hoe : nahoana i Md Jean de Matha (Mpanorina ny Fikambanan'ny Trinite Masina) no nifidy ny Trinite Masina ho Andry iorenan'ny Fikambanantsika, ka hireharehatsika mitondra ny Anarany?
vakio eto raha mahaliana anao!